Shavi Rechikadzi - megabooks
5.00 out of 5	based on 2 customer ratings	(2 customer reviews)	R180.00
Musodza adzoka zvakare…..
Shona horror from the master of the genre, a tale of rape, injustice, and vengeful demons
Author: Masimba MusodzaPublisher: Belontos BooksFormat: PaperbackPages: 514	Brand: Masimba Musodza
Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera.
Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.
2 reviews for Shavi Rechikadzi
Sharon – 2015/07/23
Musodza kwaa kumberi
Sikhanyisile Gumpo – 2015/11/03
It is a heart rending and chilling story of sexual violence on women in our society that leaves the reader baying for blood on the perpetrators and wanting justice for the victims, something that our justice system has failed to do. The story contains massive and insane narratives, that are inextricably entwined together. The characters feel real and their unadulterated conversations will leave your jaws dropping and maybe your eyes closed too. Unoramba uchivhura mapeji hana ichirova. Masimba Musodza inyanzvi.